FAQs - Ningbo Yinzhou Nuoya simenitra Block Machine Factory
Jamba biriky milina fanaovana biriky
Bubble biriky milina
Milina fanaovana Building fako
Biriky simenitra milina
Large biriky simenitra milina
Medium biriky simenitra milina
Small biriky simenitra milina
Fiarovana ny tontolo iainana biriky fitaovana
Tanteraka biriky simenitra milina mandeha ho azy
Nyqt4-15 milina mandeha ho azy biriky
Nyqt6-15 mandeha ho azy tanteraka andian-tsoratra biriky simenitra milina
Nyqt8-15 mandeha ho azy tanteraka andian-tsoratra biriky simenitra milina
Gas biriky andian-tsoratra fitaovana
Hollow biriky milina
Mandeha ho azy tanteraka hollow biriky milina
Manasa-milina mandeha ho azy biriky hollow
Hydraulic milina fanaovana biriky
Mandeha ho azy tanteraka hydraulic milina fanaovana biriky
Manasa-mandeha ho azy hydraulic milina fanaovana biriky
Boky kely hydraulic biriky milina
Multi-forming andian-tsoratra asa milina
Road biriky koronosy milina
Niantsoany biriky milina
Standard biriky biriky milina
Ny permeable biriky milina
Color road biriky milina
Inona avy ny vidin-javatra?
Ny vidin-javatra dia mety miova miankina amin'ny tolotra sy ny tsena antony. Dia handefa anareo nohavaozina vidiny lisitra araka ny orinasa mifandray anay Raha mila fanazavana fanampiny.
Manana ny filaminana ambany indrindra dia be?
Eny, isika iraisam-pirenena rehetra mitaky baiko mba manana mitohy mba ambany indrindra dia be. Raha mitady ny mivarotra fa amin'ny kely be dia be, dia manoro hevitra anao jereo ny tranonkala
Eny, dia manana ekipa matanjaka fandrafetana. Ny vokatra dia azo atao araka ny fangatahana.
Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Inona no karazana fomba fandoavam-bola no manaiky?
Afaka manao ny fanonerana ho an'ny banky, Western Union na PayPal:
30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana manohitra ny kopian'ny B / L.
Inona no vokatra Warranty?
Isika fiantohana ny fitaovana sy ny hafa. Ny fanoloran-tena dia ny fahafaham-po amin 'ny vokatra. Ao amin'ny fiantohana na tsia, dia ny kolontsaina izay namanay mba hiatrehana sy hamaha ny olana rehetra mpanjifa ny fahafaham-po ho an'ny rehetra
Antoka ve ianao azo antoka sy azo antoka fanaterana ny vokatra?
Eny, isika hampiasa foana kalitao avo fanondranana fonosana. Koa izahay mampiasa loza fonosana manokana ho an'ny entana mampidi-doza sy nampanan-kery mangatsiaka fitehirizana shippers zavatra saro-pady noho ny hafanana. Specialist fonosana sy ny tsy faneva dia mety hiharan'ny fonosana fepetra fanampiny fiampangana.
Ny sambo vola Miankina amin'ny fomba misafidy ny mahazo ny entana. Express no tokony haingana indrindra fa koa fomba lafo indrindra. Ny seafreight no vahaolana tsara indrindra ho an'ny be dia be. Izay indrindra ny tahan'ny entana azontsika ihany no manome anareo, raha fantatsika ny tsipiriany ny vola, lanja sy ny fomba. Mba andefaso olona izahay Raha mila fanazavana fanampiny.
QT4-15 mandeha ho azy tanteraka bloc simenitra mac...
E-Address 84, Gaoqiao West Road, Jiangnan Industrial Zone, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Sina
© Copyright - 2010-2017 : Zo rehetra voatokana. - Herin'ny Globalso.com
WhatsApp Chat an-tserasera!